Nzvimbo dzekufambisa uye dzekushanya dzinochengetedza vana mhiri kwemaindasitiri kuInternational Summit
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Colombia Breaking News » Nzvimbo dzekufambisa uye dzekushanya dzinochengetedza vana mhiri kwemaindasitiri kuInternational Summit
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Colombia Breaking News • dzidzo • Hurumende Nhau • misangano • Dhinda Zviziviso • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Vamiriri vepasirese vehurumende, mabhizinesi ekushanyirwa, vamiririri vekuchengetedza mutemo, UN nemasangano evagari vari kuungana muBogotá nhasi kuti vabvumirane nezverongwa hwenguva refu uye chiito chekumisa kushungurudzwa pabonde nekushungurudzwa kwevana mumakambani ekufambisa.
The Musangano Wepasi Pose weKuchengetedzwa Kwevana Mukufamba uye Tourism, inogarwa neHurumende yeColombia mukubatana neHigh-Level Task Force pakuchengetedzwa kwevana muKufamba neKushanya; UNICEF; UNODC; WTTC uye ECPAT International ichaunza pamwechete vanopfuura mazana mana vatori vechikamu vanobva munyika makumi maviri neshanu kuti vazvipire mukusimbisa chiito. Izvi zvinosanganisira kuvimbisa kusimudzira kuziva nezvekushungurudzwa kwevana pabonde. kurwisa kubiwa kwevana; kuomerera kumitemo yekuzvibata; kudzora 'kuzvipira' mumasangano ane vana varipo; uye kuwedzera kudzidziswa kwevashandi kuti vazive kana vana vari munjodzi yekutengeswa kana kubatwa chibharo.
"Musangano uyu muenzaniso wekuzvipira kweHurumende yeColombia mukushanya zvine mutsindo" akadaro Sandra Howard Taylor, Mutevedzeri wegurukota rezvekushanya kubva kuHurumende yeColombia, uye musangano uyu. “Tinoedza kudzivirira kushandiswa kwevana mukushanya. Mhedzisiro huru yemusangano uyu ichave kusaina chiziviso kubva kune vega uye vehurumende, kusimbisa mutemo nezviito zvekuchengetedza vana. Colombia inyika inozivikanwa neakawanda maitiro akanaka mukushanya uye yatotora matanho mazhinji, kusanganisira kuchengetedza vana. Anenge makambani ese ekushanya muColombia, angangoita zviuru makumi maviri neshanu, akabatana nezvirongwa zvekushanyirwa neHurumende kudzivirira nekudzivirira kubiridzirwa kwevana. ”
Vamiriri vanotarisirwa kubvumirana chirongwa, chakanangana neA2030 Agenda ye Sustainable Development kuzadzisa kurudziro ye Yepasi Pose Kudzidza nezveKushandiswa Kwepabonde kwevana muKufamba uye Tourism. Vazhinji veavo vari pamusangano uyu vari kukurudzira hurumende, vemasangano akazvimirira, vanoita zvekuchengetedzwa kwemitemo, vamiriri veUN nemasangano anoshanda akazvimirira kuti vadzivirire zviri nani vana kubva mukutengesa nekufamba vanokanganisa vana pabonde. Izvi zvinosanganisira, kunyanya, kubatana kukuru pakati pehurumende neindasitiri.
Vachitaura vakamirira World Travel & Tourism Council (WTTC), masimba epasirese mupiro wezvehupfumi uye zvemagariro pakufamba nekushanya, Helen Marano, Mutevedzeri Wemutungamiriri wenyika, akataura achiti, "Musangano wanhasi idanho rakakosha rekuziva makambani mazhinji ayo ndivo vatakuri vakajairika muchikamu chenyaya yakakosha iyi. Ivo vanoshanda sekurudziro kune ese mabhizinesi kutora zvidziviriro zvevana kudzidziswa uye mashandiro ezuva nezuva. Kuzvipira kunofanirwa kutsanangurwa mukuzivisa kunosimudzira kudyidzana kwakasimba. WTTC inomira kumashure kwekuzvipira kwakasimba nenhengo dzeKanzuru kuti vatsigire kusangana zvakakosha zvekuchengetedzwa kwevana mumhando dzese muindasitiri yeKufamba neKushanya. Tinodada nemubatanidzwa wevatori vechikamu veMusangano uye tinokurudzira nhengo dzemakambani kuti vateedzere. ”
Chikamu chekufamba uye chekushanya chakakura zvakanyanya mumakore apfuura. Inopa 10.4 muzana kuGDP yepasirese uye 1 mu10 mabasa, ine fungidziro 4 muzana muzana wepagore kukura pamusoro pemakore gumi anotevera. Sangano reUN World Tourism Organisation rinoronga vafambi vanosvika mabhiriyoni 1.8 panosvika gore ra2030. Kukura uku kunopa mukana wakakura uye usinganetsi kune vese vanofamba uye kunosimbisa kudikanwa kwenzira dzakasimba dzekuchengetedza vana.
Nyika zhinji hadzina mutemo wakakwana wekumisa kana kudzivisa vanofamba nevana pabonde vanopara mhosva, avo vanowanzotora mukana wehurombo, kusadzikwa munharaunda, nemitemo isina kusimba inopa tsika yekusarangwa. Mumakore achangopfuura, kuwedzera hunyanzvi muindasitiri yekufambisa neyekushanya kwakawedzera kune njodzi. Uye zvakare, iyo Internet inobatsira kuwana nzira dzekufamba, asi zvakare inogona zvakare kuita njodzi dzevano famba vana vanoita bonde vanoshandisa vana zvisirizvo.
Kune vakapona mukushungurudzwa pabonde, iyo nhaka inosanganisira yakakomba uye yehupenyu-hurefu hwemuviri, hwepfungwa uye hwepfungwa. Iyi imhosva inoparadza nharaunda, inoparadza mhuri nehunhu hwetsika, uye inokanganisa tarisiro yezvehupfumi mune ramangwana revanhu vese.
Mamiriro acho ane simba. Makumi emakore mashoma apfuura, fungidziro yaivepo ndeyekuti vafambi vevacheche vanoita bonde vaiuya chete kubva kunyika dzekumadokero ndokuenda kune varombo, dzichiri kusimukira nyika. Nhasi, tinoziva kuti mitsara iri pakati pekuenda, yekufambisa uye neyenyika nyika yakasviba uye chimiro chevatadzi chakasiyana.
Nekuti iyi inyaya yekuyambuka uye kuyambuka chikamu chemakambani, kupedza kubatwa zvisina kufanira pabonde kwevana mukufamba uye kushanya kunoda kudyidzana kwepasirese uye kudyidzana kwemasangano. Pane dikanwo yekubva pamhinduro dzakakamurwa dzekudzivirira kwevana munyika imwe neimwe kuenda kune yakazara nzira. Musangano weInternational Summit weKuchengetedzwa kwevana muKufamba neKushanya muBogotá, Colombia kuyedza kuunza pamwechete vatungamiriri venyika vanopfuura makumi mashanu kubva kuhurumende, masangano akazvimirira, vamiriri vemitemo nemasangano evagari vemo kuti vaite izvi.
Musangano uyu ndeyekutevera kune iyo Yepasi Pose Kudzidza nezveKushandiswa Kwepabonde kwevana muKufamba uye Tourism, kekutanga kubatanidzwa kwesimba ne67 vadyidzani kuti vanzwisise mamiriro epasi rose uye chiyero chemhosva iyi. Chidzidzo ichi chinopa kurudziro inoda chiito chakabatanidzwa kubva kuUN, hurumende, NGOs, mapurisa, uye mabhizinesi anotariswa nevashanyi. Musangano uyu uchasvika pakubvumirana pamusoro penzira yekuenderera mberi nekuita izvi kurudziro.
Sustainable Development Goals uye Agenda 2030 zvinosanganisira zvinangwa zvakanangana nekushanya kwakasimba uye kupedza mhirizhonga kuvana. Musangano uyu uchagadzira gwara remigwagwa iro vese vanobatana vanobvuma kuzvipira naro mukuita Agenda 2030.
Nezve WTTC: World Travel & Tourism Council ndiyo masimba epasirese pane hupfumi uye zvemagariro mupiro weKufamba & Tourism. Inokurudzira kukura kwakasimba kwechikamu, kushanda nehurumende nemasangano epasi rose kugadzira mabasa, kutyaira kunze kwenyika uye kugadzira hupfumi. Gore rega rega WTTC, pamwe neOxford Economics, inogadzira mukurumbira weEmpact Impact Report, iyo inotarisa mabhenefiti ezvehupfumi pamwe neKufamba neKushanya pasi rose, matunhu nenyika. Gore rino chirevo chinoratidza data pane makumi maviri neshanu mapoka uye nyika zana negumi neshanu. Chikamu ichi chinopa madhora US $ 25 trillion kana 185 muzana yeGDP yepasirese, kana zvibodzwa zvese zvakanangana, zvisina kunangana uye zvakakonzerwa zvikatariswa. Chikamu ichi zvakare chinopa 8.3 mamirioni emabasa kana rimwe chete mugumi remabasa ese epasi.
Nezve UNICEF: UNICEF inoshanda mune dzimwe nzvimbo dzakaomesesa pasi rose, kuti isvike kune vana vanotambura kwazvo pasi rose. Kupfuura nyika 190 nenharaunda, tinoshandira mwana wese, kwese kupi, kuvaka nyika iri nani kune wese munhu. Tevera UNICEF pa Twitter uye Facebook
Nezve UNODC: Sangano reUnited Nations rinoona nezveDrugs and Crime ndiye mutungamiri wepasi rose mukurwisa zvinodhaka zvisiri pamutemo uye mhosva dzepasi rose. Inoshanda mumatunhu ese epasi kuburikidza netiweki yakakura yemahofisi emunda. Basa rayo rinosanganisira kubatsira nyika kuti dzisimbise uye dzizadzise zvibvumirano zvine chekuita nenyika dzepasirese uye nekuvandudza mitemo yepamba yezvinodhaka, hugandanga nemhosva, dzakadai sekutengesa vanhu. Kubva 2015, UNODC yakatungamira chirongwa chinonzi "Global Action yekuDzivirira uye Kugadzirisa Kubiridzira muVanhu uye Kutengeswa kweVapoteri," yakapihwa mari neEuropean Union uye ikaitwa mukubatana neInternational Organisation for Migration neUNICEF, inosvika nyika gumi nenhatu muAfrica yose. , Asia, Eastern Europe uye Latin America. Iri basa rinowira pasi pegore ra13 Sustainable Development Agenda, iyo inodaidzira kuti kutengeswa nekutambudzwa kwevana kumiswe.
Nezve iyo Yakakwira-Chikamu Chikamu Chekuita paKuchengetedzwa kweVana muKufamba neKushanya: Boka repamusoro-soro rebasa rakatungamira kuvandudzwa kweiyo Global Study pamusoro peKushandiswa Kwepabonde kweVana muKufamba neKushanya. Basa rayo kubviswa kwekushungurudzwa kwevana pabonde kubudikidza nekumisikidzwa kwemazano echidzidzo chepasirese.
Nezve ECPAT: ECPAT International inzvimbo yepasirese yemasangano akazvipira kupedza kushungurudzwa kwevana pabonde. Nenhengo dzinopfuura zana munyika makumi mapfumbamwe nematatu, ECPAT inotarisa pakumisa kubiridzirwa kwevana nekuda kwekuita zvepabonde; mwana uye kuroorwa kwekutanga kumanikidzwa; online online kubatwa kwevakadzi pabonde; nekushungurudzwa pabonde kwevana vari mubazi rekushanya nekushanya. IEECPAT International Secretariat iri muBangkok Thailand. Kuti uwane rumwe ruzivo, enda ku www.nXNUMXpis.net